> Resource > Talooyin > Best Free Online Photo collage Kan sameeyey,
Waxaad doonaa waayo-aragnimo xiiso leh abuuraya aad collage sawir gaar ah iyo iyaga oo asxaabta iyo qoyska la wadaago. Photo collage bandhigayaa sawirkaaga si farshaxan oo iyaga ka dhigaa inay u badan soo jiidasho iyo xiiso leh marka la barbar dhigo kaliya goosin ka mid ah sawir caadi ah.
Online Kan sameeyey Photo collage ama Desktop Software?
Waxaa jira dad badan dejiyeyaasha collage sawir online lacag la'aan ah ka heli kartaa internetka. Intooda badan waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan oo ay bixiyaan qaar ka mid ah arrimo aasaasi ah oo uu ka soo xusho. Haa, oo keliya foom oo aasaasi ah. Taasi waa caddaalad ah maxaa yeelay waa xor ah oo aan aad ka filan doonaa uruuriyaa arrimo cusub laga cabsado weyn bixiyaan by software desktop bixisay sida Wondershare iCollage for Mac . Marka laga reebo arrimo xaddidan, tirada photos in sidoo kale geliyaan ayaa xaddidaadda ah, sida caadiga ah ka yar tahay 10 photos.
Download Free Trial of Kan sameeyey Photo collage
Waa kuwee collage sameeyey uu ii?
Sidaas, haddii aad rabto in la abuuro collage a photo in Dhabtii wow saaxiibadaa, aad software oo bixisa arrimo dheeraad ah oo qurux badan oo waayo-aragnimo user fiican bixisay. Laakiin haddii aad rabto in la siiyo software collage sawir isku day ah sidii gacan cagaaran, dejiyeyaasha collage sawir online baahiyahaaga. Halkan waa mid ka mid ah Rinjiga sawir collage online aan jeclaa.
Collage Sawirka kor ku xusan waxaa lagu sameeyey photovisi sida maalin hadiyad Hooyada ee, oo waxaa la dhigay mid ka mid ah 18 arrimo laga heli karaa bogga. Geedi socodka ah ee la abuurayo collage sawirka waa iska sahlan, kaliya dooran template ah, ka dibna ku dar photos, iyo collage ah sawir qurux badan si toos ah ahbaa doonaa. Marka aad dhamaysid, waxaad badbaadin kartaa collage sawirka si aad u computer ama u wargeeyaan goobta ee gallery. Kale oo ka Photovisi, waxaa jira adeegyo kale oo lacag la'aan ah online sida: Picartia, Picture2Life, Pixisnap, si aad u dhigi collages shakhsi gaar ah. Ku raaxeyso!
Sidee si ay u gubaan mp4 daaqadaha movie gaare